Sicela iminyaka emininzi esidlule ukufumana into efanayo noko sijamelene kanye ngoku. Ngaphandle bonke oonobumba ixesha zikhe ngaphambili, ngoko kufuneka coronavirus yanyikima ihlabathi lethu ngeendlela asizange wawucinga. Kwiinyanga ngaphantsi kwesithathu, ihlabathi itshintshile, ngokukhawuleza ngaphandle kwesilumkiso. Ezigidi zabantu abachatshazelwa meko, kwaye ngokwenene ukuthetha malunga lombulalazwe lwehlabathi, kwaye imeko kuphakuzela ukuba efikelela yonke kwilizwekazi. E Italy abulawe kuphela abantu abamalunga nama-1,000 ngamini-nye. Eyona nto ibuhlungu kukuba akukho bani waziyo ukuba uya kuqhubeka ixesha elide kangakanani, okanye xa ihlabathi liya noko eqhelekileyo kwakhona.